Nzuzo Nzuzo nke Ahịa Digital | Martech Zone
Ihe Nzuzo Nzuzo nke Ahịa Digital
Na Tọzdee, Septemba 10, 2013 Wednesday, September 11, 2013 Douglas Karr
Ihe omuma ihe omuma a sitere na Hostgator gbara n'etiti mgbasa ozi na nkwalite, ngwa oru na ihe omuma ahia dijitalụ. SEO bu atumatu, mana nyocha abughi uzo - obu ihe eji enyere aka imata atumatu a. Marketinggwọ ahịa bụ akụkụ nke atụmatụ zuru ezu mana ọ bụghị atụmatụ na ya n'onwe ya. Na ntughari abughi uzo, o sitere na atumatu. Dị dị egwu otú ha si etinye ya, mana enwere ụfọdụ ngwaọrụ, akwụkwọ akụkọ, na stats na-enye uru.
Hostgator: marketingre ahịa nke ọma na mpaghara dijitalụ nwere ike iyi ihe siri ike na ihe omimi. Enwere ọtụtụ ụzọ a ga-esi n'otu oge tụọ ma tụọ ya iji hụ na ị na-arụ ọrụ kachasị mma, ma nweta ọtụtụ ụda maka ego gị.
Ekwetaghị m na ire ahịa na mpaghara dijitalụ bụ ihe siri ike ma ọ bụ ihe omimi. Enwetụbeghị ụdị ọrụ anyị ji eme mkpebi dị mma. Na enweghị aha ahịa mkpanaka, usoro vidiyo, na ịre ahịa email - echere m na infographic a efughị ​​akara ahụ.
Tags: Analyticscontent MarketingakakabaredeHostgatorA
Vidio: Nlekọta mmekọrịta na Search Smackdown
Kedu ihe kpatara iji jiri ọdịnaya anya na Social Media?